के महिनावरीलाई सार्न सकिन्छ ? - Health Chautari Health Chautari
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०९:०४
के महिनावरीलाई सार्न सकिन्छ ?
Published on : २७ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०९:०४
महिलाहरु किशोरवास्थामा प्रवेश भएदेखि गर्भधारण नभएसम्म हरेक महिना योनीबाट रगत बग्छ। यस्तो रगत २ देखि ७ दिनसम्म बग्छ र आफैँ बन्द हुन्छ। महिनामा एकपटक रगत बग्ने भएकाले यसलाई महिनावारी भनिएको हो।
यसलाई रजस्वला, पर सर्नु, नछुने हुनु आदि पनि भनिन्छ। म्हिनावरी चक्र व्यक्तिअनुसार २१ देखि ३५ दिनको हुने गर्छ। डिम्बासयको डिम्ब(अण्डा) परिपक्व भएपछि केटीहरुको पहिलो महिनावारी हुन्छ। महिनावारी सामन्यतया ८ देखि १९ वर्षको उमेरमा सुरु भइ ४५ देखि ५५ वर्षको उमेरसम्म हुन्छ।
महिनावारी सुरु भएपछि एक प्रकारको सेतो पानी योनीबाट बग्न सक्छ। यो समान्य हो तर यो गन्हाउने वा योनी वरिपरि चिलाउने वा पोल्ने भयो भने यसको उपचार गर्नुपर्छ। महिनावरी हुँदा यौनांगको सरसफाइ राम्रोसँग भएन भने यस्तो समस्या हुने गर्दछ।
महिनावरी प्राकृतिक र स्वाभाविक प्रक्रिया हो र स्वस्थ्य अवस्थाको पनि चिन्ह हो तर यसको बारेमा सही जानकारी नहुँदा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा धेरै किशोरीहरु आत्तिने गर्छन् र केहीले रोग लाग्यो भनेर सोच्छन्। तसर्थ घरमा भएका अभिभावकहरुले यसबारे जानकारी दिनुपर्छ।
उपत्यकामा थप कडाइ गर्दै एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी